Avira Security Antivirus & VPN အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2022 - အခမဲ့ - 9Apps
ဒေါင်းလုပ် APK（36.6MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် Avira Security Antivirus & VPN
NEW! ပိုပြီး Android အတွက်ထိပ်တန်းဗိုင်းရပ်စ်စကင်နာများနှင့် remover ထက်ရယူပါ! နောက်ဆုံးပေါ်မိုဘိုင်း antivirus ဆော့ဖ်ဝဲယခုဖုန်းကိုသန့်စင်ခြင်းနှင့်အာနိသင်တိုးမြှင့်နှင့်အတူအဆုံးစွန်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးပေါင်းစပ်။ Plus အား, ကအခမဲ့ VPN ကိုနှင့်အတူသင့်ရဲ့ privacy ကိုကာကွယ်ပေးသည်။
သင့်မိုဘိုင်း device ကိုဒစ်ဂျစ်တယ်ကမ္ဘာရန်သင့်သော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျအငျတာနကျ, စတိုးဆိုင်ဓာတ်ပုံများ, အဆက်အသွယ်များ, အီးမေးလ်များနှင့်ငွေပေးချေမှုသတင်းအချက်အလက် browse ။ ဒါဟာဒါကြောင့်သင့်ဒေတာတွေကိုလုံခြုံရေးအတွက်အရေးပါ Is, သင့်အလုပ်သို့မဟုတ်သင်ကိုချစ်သူတို့နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ပဲတစ်လမ်းမှအလွန်အရေးပါပါလိမ့်မယ်။ Avira Antivirus ကိုသင်လုံခြုံ-နှင့်ကအားလုံးကိုတစ်ခုတည်း app ကိုစထုပ်ပိုးရဲ့နေဖို့လိုအပ်သမျှ tools တွေကိုပေးသည်။ ပါ Scans, လုပ်ကွက် & ဖယ်ရှားရေး viruses, spyware, malware✓
Key ကို Avira Antivirus ကိုလုံခြုံရေး & VPN ကို
•စူပါ-အလင်း Virus Scanner & Cleaner ၏ Features •နေ့စဉ်မြန် VPN- ကို 100 MB ။ လုံလုံခြုံခြုံဒေတာ, surfing, Unblock ပထဝီကန့်သတ်ဝက်ဘ်ဆိုက်များ✓
• System ကို Optimizer anonymizes - သင့်အီးမေးလ်လိပ်စာများသို့မဟုတ်အကောင့်
•အထောက်အထားကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးများအတွက်သန့်ရှင်းသင့်ရဲ့ device ကိုရဲ့ memory နဲ့သိုလှောင်မှု > •ဖုန်းနံပါတ် Locator & Tracker -, သင်တွေ့ကူညီပေးလမ်းကြောင်း, & သင့်ရဲ့ပျောက်ဆုံးခြင်းသို့မဟုတ်ခိုးယူဖုန်းကို✓
•သီးသန့်လုံခြုံရေးအကြံပေး recover - ✓
• Applock အထိခိုက်မခံ data ကိုမှတောင်းဆိုမှုကို access ကို apps ရသောရှိုးပွဲများ - PIN ကိုသင့်ရဲ့အထိခိုက်မခံ app များကိုကာကွယ်ပေးရန် (ချက်တင် , ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု, Skype ကို, etc) ✓
•ကွန်ယက် Scanner - အတူတူပင်ကို Wi-Fi ကို✓
•လုံးဝအခမဲ့ချိတ်ဆက်ထားပြီး Discover အခြား devices - ဤသူအပေါင်းတို့သည်အင်္ဂါရပ်တွေ Avira antivirus ကိုနှင့်VPN✓
နှင့်အတူအခမဲ့ရရှိနိုင် Android အတွက်
အဆိုပါ Ultimate Virus Scanner နှင့်ဖယ်ရှားရေး
Avira Antivirus ကိုတိုက်ခိုက်မှု phishing ထံမှဗိုင်းရပ်စ်များ, malware, spyware နဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံအခမဲ့သင့်ရဲ့ Android device ကိုစောင့်ရှောက်တတ်၏။ သင်သည်သင်၏ကိရိယာကိုသုံးအဖြစ်ဒါဟာနောက်ခံတိတ်တဆိတ်အလုပ်လုပ်တယ်, နှင့်ပေါ့ပါး app ကို downloads, သင့်ရဲ့ surfing နှောက်ယှက်ခြင်းသို့မဟုတ်သိုလှောင်ရန်နေရာပမာဏတက်ယူလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒီဇိုင်းအားဖြင့်သုံးပါနှင့်ထိုးထွင်းသိမြင်ဖို့ရိုးရှင်းတဲ့, သင် antivirus ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိရိယာများကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည့်စုံ suite ကိုအပေါ်ရေတွက်လို့ရပါတယ်။
Virus Scanner နှင့်ဖယ်ရှားရေး
Adware များနှင့် Spyware Antivirus ကို
- သင့်ရဲ့ device ကနေ Block ကို adware နဲ့ spyware တွေရဲ့ browsing ပြုလုပ်နေစဉ်မှာကာကွယ်မှုတိုးမြှင့်ဖို့။
- ransomware အခမဲ့သင်၏ကိရိယာများကိုသိမ်းဆည်းထားပါနှင့်သင့်ဒေတာတွေကိုတတိယအုပ်စုတွေကဝင်ရောက်သည်မဟုတ်သေချာစေရန်။
Disk ကို Scanner နှင့် Memory Optimizer
- သင့်သိမ်းဆည်းခြင်း, မှတ်ဉာဏ်စကင်ဖတ်, သင်၏ဖုန်းသို့မဟုတ် Tablet ကိုပိုကောင်းအောင် ..
အဆိုပါ သင့်ရဲ့ Android device ကိုအပြည့်အဝကာကွယ်ထားသည်သေချာစေရန်သင့်ရဲ့ Android Device
ကာကွယ်ပါရန်အကောင်းဆုံးအခမဲ့ VPN ကိုကျနော်တို့ app ကိုသို့တိုက်ရိုက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စူပါအစာရှောင်ခြင်း VPN ကိုပေါင်းစည်းပါတယ်။ Access ကိုပထဝီကန့်သတ်က်ဘ်ဆိုက်များ, သင် Avira အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ VPN ကိုအတူရောရာ၌သင့်ရဲ့ surfing နှင့်တိုး privacy ကိုဖျောက်ပေးသည်
- ။ အသုံးပြုခြင်းဟာပေါင်းစည်း VPN ကိုအမည်ဝှက်အင်တာနက်ကို browse မှ
ရိုးရှင်းသော - အသုံးပြုမှုမှရိုးရှင်းသောနှင့်ထိုးထွင်းသိမြင်, သင်တဦးတည်းကလစ်ပေါ်နှင့်အတူသင်၏ VPN ကိုဖွင့်နိုင်ပါတယ်။
မိုဘိုင်း VPN ကို
- ကျောင်းတွင်အသုံးပြုမှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ VPN ကို, အလုပ်မှာ, ဒါမှမဟုတ်အိမ်မှာ။ သငျသညျသွားလေရာရာ၌ Avira အမည်မသိ surfing သေချာ!
Go ကို PRO - အ Ultimate Wi-Fi လုံခြုံရေး, Malware နှင့်ဗိုင်းရပ်စ်ဖယ်ရှားရေး
အများဆုံးတောင်းဆိုအသုံးပြုသူများအဘို့, Avira remover နဲ့တွဲပြီးအဆုံးစွန်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးနဲ့ spyware တွေရဲ့ထောက်ပံ့လုံးဝအမည်မသိကို web surfing ။ Pro ကိုသွားပြီးဤအင်္ဂါရပ်ရ :.
မိုက်ကရိုဖုန်း & ကင်မရာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး
Web ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး Apps / ခိုင်ခံ့> - Block ကိုအန္တရာယ်ရှိတဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေနဲ့ Android အတွက်အဆုံးစွန်အော်တိုဗိုင်းရပ်စ်စကင်နာပျော်မွေ့။
အင်္ဂလိပ်, ဂျာမန်, ပြင်သစ်, ဒတ်ခ်ျ, အီတလီ, စပိန်, ဘရာဇီးပေါ်တူဂီ, ရုရှ, တူရကီ, ကိုးရီးယား, ဂျပန်နှင့်တရုတ် (ရိုးရှင်းသောနှင့်ရိုးရာ)
ဒီ app ကိရိယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကိုအသုံးပြုသည်။
Avira Phantom VPN Pro Review 🔥100% BRUTALLY HONEST REVIEW!